I-BBC izama isikhathi se-UK ukusibekela phansi iqhaza lase-UK ebugqilini - ama-teles adluliselwe
I-BBC izama isikhathi sobungcweti ukwehlisa indima ye-UK ebugqilini
Kungani i-BBC yashicilela i-athikili ekhombisa umthengisi wezigqila waseNigeria wekhulu le-XNUMX phakathi kwemibhikisho yomhlaba wonke we-BLM?
NgoJulayi 2018, intatheli yaseNigeria kanye nomlobi u-Adaobi Tricia Nwaubani wabhala indoda eqotho, ekhangayo futhi ekhanyisela esihlokweni mayelana nokuthi impilo kagogo wakhe ongasekho njengoba ayengumthengisi wezinceku wekhulu le-19 wayibumba kanjani impilo yakhe.
Engxoxweni ebanzi eshicilelwe yiNew Yorker, uNwaubani walandisa izindaba ezithokozisayo ngomndeni, amasiko ama-Igbo, ubugqila kanye nobukoloni. Wachaza ukuthi umkhulu wakhe omkhulu, uNwaubani Ogogo Oriaku, wayithola kanjani ingcebo nethonya ngesikhathi sokuhweba ngezigqila ngokuthengisa abanye abantu base-Afrika nokusiza izithunywa zevangeli ukusungula ubuKristu eNigeria.
Ubuye futhi wanikeza i-akhawunti ethembekile nenengqondo yemizwa engqubuzanayo abaningi abaseduze naye ngefa likayisemkhulu wakhe.
Usitshele ukuthi ubaba wakhe wake washo kanjani ukuthi wayengeke abe namahloni ngalo mthengisi wezigqila odume kakhulu. Emcaphuna wathi, “Kungani kufanele ngibe yibhizinisi lakhe ebelisebenza ngokusemthethweni ngaleso sikhathi. Wayehlonishwa yiwo wonke umuntu.
Kepha ubhale nangezihlobo zakhe azibona zihlukile. Usitshele ngomzala wakhe uChidi, owakhulela eNgilandi futhi wakhetha ukufihla umndeni wakhe odla lubi ngomndeni wakhe kubangani bakhe baseBrithani. Ubuye wabhala ngomunye umzala, uChiomia, othi ucela “uNkulunkulu ukuba asithethelele okhokho bethu” ngaso sonke isikhathi lapho ebuka i-movie ekhuluma ngobugqila.
Kulesi sihloko, uNwaubani waqokomisa imizamo yomndeni wakhe yokuhlukana nomlando wakhe obuhlungu futhi ongcolile. Uveze ukuthi ngonyaka ka-1992, bekholelwa ukuthi bebejeziswa ngamacala okhokho babo, umphakathi wakubo uqhamuka lapho wakhetha ukuthatha igama elisha ukukhombisa "ukwehlukana nobubi besikhathi esedlule." Ubuye futhi ngokuqhosha wachaza ngemininingwane yomkhosi wokukhulula umndeni wakhe owabamba ngoJanuwari 2018 ukumemezela esidlangalaleni iqhaza lakhe kwezentengiso yezigqila. “Ngesikhathi kuqhubeka lo msitho, ngakhululeka ngikhululekile,” kusho uNwaubani ekhuluma yedwa, “umndeni wami ekugcineni uthathe igxathu elingaphezu kokuhleba nokukhathazeka.
Ngokokulandisa kukaNwaubani eNew Yorker, umndeni wakhe wamelana nalesi silingo ukwamukela umkhulu wabo njengomkhiqizo wesikhathi sakhe, bathatha ukuma okuqinile ebugqilini futhi bagqashula ngokuphelele efeni lakhe elinyanyekayo.
Ukube le ndaba yayigcine i-akhawunti kaNwaubani kuphela yomlando womndeni wakhe, kungenzeka kube umnikelo wakhe oqotho emizameni yokubhala ngokweqiniso esinye sezikhathi ezibuhlungu kakhulu emlandweni wesintu. Wayengabekezelela njengokuhlaziywa okuqinile, okunokuqonda nokuzimisela kokuhweba ngezigqila ngombono wase-Afrika. Ngaphezu kwalokho, esimweni sezombusazwe sanamuhla esithuthukayo, ubenganikeza isibonelo sendlela imindeni, imiphakathi kanye nemiphakathi engabungaza ngayo ngobuqotho ubugebengu bokhokho bayo futhi zihlenge esisindweni esihlukumezayo sokungabi nabulungisa emlandweni. .
Kodwa-ke, ngeshwa, akunjalo.
NgoJulayi 19, sekusele amasonto ayisikhombisa ukubulawa kwamaphoyisa kukaGeorge Floyd eMinnesota kwaqhakambisa umhlangano womhlaba wonke wobulungiswa bobuhlanga, uNwaubani wakhetha ukuyiphinda futhi lendaba umkhulu wakhe, lokhu izikhathi ku-BBC. Okusha esihlokweni , enesihloko esithi "Umkhulu wami wathengisa izigqila", ugxile ekuhlelweni okusha futhi akakaze akhulume ngemizamo yomndeni wakhe yokwamukela ifa lomnikazi wesigqila.
Ngalesi sikhathi, intatheli yaseNigeria ichaza umkhulu wayo hhayi njengomuntu "owathola amandla nengcebo ngokuthengisa abanye abantu base-Afrika ngaphesheya kwe-Atlantic", kodwa ngokuthi "usomabhizinisi" wayephila esikhathini lapho "ababenamandla kakhulu basinda futhi i-bravest idlula".
Kukhona futhi okungashiwo ngemizwa edabukisayo ebugqilini obutholwa ngumndeni wakhe. Ngenxa yalokho, asikho isibonakaliso sokuziphatha okuphelele, okuqhubekayo okucatshangwayo okuyi-New Yorker.
Ngokusobala, ngokungafani nencazelo yokuqala eyashicilelwa eminyakeni emibili edlule, inhloso yendatshana ye-BBC akusiko ukuveza umlando womzabalazo womndeni wokuza nezenzo ezinyantisayo zokhokho, kodwa ukunikela ukuzivikela kulo lokhokho ngokugcizelela ukuthi amakhosi ezinceku zayizolo akufanele ahlulelwe ngamazinga wokuziphatha anamuhla.
Ubugqila - UTimothée de Fombelle: "Umuntu ngamunye udatshulwe wa ...
UMnu P uphendula fan: "Ngithola imali ethe xaxa kusukela beng ...
Gxila embonini yezokushushumbisa kwabantu e…
Ku-athikili ye-BBC, emzamweni oshubile noshaqisayo wokukhazimulisa umuntu othengisela abantu izinto zokuziphilisa, uNwaubani uhlanganyela ne-anecdote eveza ukhokho wakhe omkhulu njengeqhawe ukuthi ahlangane ngempumelelo nezikhulu zikahulumeni wamakoloni waseBrithani ngemuva kwezigqila zakhe ”.
Umbhalo we-BBC akagcini nje ngokuzama ukumisa ifa likaNwaubani Ogogo Oriaku, kodwa futhi uzama nokusola ukuhweba ngezigqila kwabantu base-Afrika ngendlela exakile. Uthi "ukuthengwa nokuthengiswa kwabantu phakathi kwamaIgbo kwenziwa kudala ngaphambi kokufika kwabaseYurophu" futhi usho ukuthi ukufika kwabantu base-Europe kusheshise umkhuba osukhona nowasungulwa. Ngokwenza kanjalo, lesi sihloko sihlose ngokucacile ukudlala ngeqhaza lase-UK lokushushumbisa ama-Afrika alinganiselwa ku-11-14000000, XNUMX, iningi lawo elifele olwandle, noma ezandleni zezixuku ezinolaka, ezinenzondo noma inceku ezikhohlakele eMelika.
Encwadini yakhe ye-BBC, uNwaubani akagcini ngokunikeza umbono wokuthi ubugqila empeleni kwakungezokwakha zase-Afrika kuphela, kepha unikeza nesikweletu sase-UK ngokuqeda lokho. Ngaphandle kosizo loMbuso waseBrithani okhanyiselwe futhi onozwela, uNwaubani uyakholelwa, ukuhweba ngezigqila bekungeke kube nakho jamais kwaphela. Ngaphezu kwalokho, uphakamisa ukuthi, ukube ama-Igbos ayethanda izifanekiso ezibunjiweyo, umkhulu wakhe nakanjani wayezofanela ukuthi akhe owakhe omunye umhlonishwa.
Manje-ke kungani uNwaubani ethathe isinqumo sokuyilandisa indaba kagogo wakhe futhi ayivikele ngesikhathi lapho isimemezelo senhlangano iBlack Live Matters yobulungiswa bohlanga sesiqale ukuzwakala emhlabeni wonke? Futhi kungani i-BBC unqume ukuthi unesibopho sikazwelonke sokuhlenga ukuqhosha okulimazayo kanye nokuwohloka kokuziphatha koMbuso WaseBrithani ngento ekhazimulisa umthengisi wezigqila wase-Nigeri wangekhulu le-XNUMX ngesikhathi esibaluleke kangaka emlandweni ?
I-akhawunti ka Nwaubani ebuyekeziwe futhi evikela kakhulu ngempilo kagogo wakhe omkhulu inesifiso sokuvikela ilungelo elingafanele. Kukhumbuza imizamo kaMengameli uDonald Trump yokufuna ukubhala kabusha umlando futhi wethule abanikazi bezigqila nababulala abantu abaningi ababumba umlando we-America elidlule "njengabantu abanesibindi kakhulu nabanesibindi abake bangena. ubuso buka Terre ".
Ngokubambisana kwakhe ne-BBC, futhi uzama ukudambisa i-UK ngandlela thile emzabalazweni wayo wokuqala wokuthuthukisa ukuhweba ngezigqila, ukwakha izinhlaka zamakoloni e-Afrika yonkana nokwakha izinhlaka zobandlululo. emhlabeni.
Ngenxa yobugqila baseBrithani kanye nobukoloni, i-BBC ijabulela ukufinyelela e-Afrika yonkana ngokusebenzisa izithangami zethelevishini, umsakazo kanye online. Kuyizwi elithembekile nelidumile e-Afrika. Kodwa-ke, njengoba indatshana kaNwaubani ikwenza kucace, ngisho nangesikhathi lapho imimoya yezinguquko ezihamba kancane futhi kancane ishaya umhlaba, uyehluleka ukumelana nesifiso sokuvikela ukwenqaba kwesitebhisi sase-UK ukwenqaba qaphela indima yayo ehamba phambili ekuhwebeni kwezigqila okwenziwa amakhulu eminyaka. .
Akuzange kuze kube ngu-2015 lelo le UNdunankulu waseBrithani ngaleso sikhathi, uDavid Cameron, utshele abaseJamaican ukuthi "baphume" "ebugqilini obunzima bobugqila" ngenkathi bedumisa indima ye-United Kingdom ekuqedeni ukuhweba ngezigqila. we izigqila. UNdunankulu wamanje, uBoris Johnson, naye waziwa ngokuncoma kwakhe uMbuso waseBrithani nemizamo yakhe ephindaphindwe yokwenqaba indima ye I-Great Britain ebugqilini .
Ngokuphikisana nalesi sizinda, kulula ukuqonda ukuthi kungani i-BBC inqume ukushicilela incwadi kaNwaubani eveza ubugqila njengento eyakha ama-Afrika njengoba umhlaba ugxile efeni lamaKoloni ase-UK.
Imizamo yabazuzilezi abaphilayo bezokuthengiswa kwezigqila ezinwebekayo ukuze kunqotshwe imimoya yoshintsho, ilize.
Les Imidwebo yabathengisi ngezigqila, amadoda anjengo-Edward Colston, umthengisi waseBrithani owenza ingcebo yakhe ngokuhweba ngezigqila ngasekupheleni kweminyaka yama-1600, athunjwa ngempoqo e-USA, e-UK nakwamanye amazwe ahlukahlukene ase-Europe. Izwe laseMelika liphinda licubungule izinqubomgomo zalo zesikhathi esedlule nezamanje zamaphoyisa, ubuhlanga, kanye nezimpilo zabantu abamnyama. Okufanayo kuya kwizitudiyo zaseHollywood. Kuyafana izinkampani, njenge-Facebook neNetflix.
Kungokufanayo Afrika wabo bonke imibala .
Lutho okushicilelwa yi-BBC ngeze kwathulisa amazwi abiza i-UK ukuthi ilalele umlando wayo omude onesihluku.
umthombo: https: //www.aljazeera.com/indepth/opinion/bbc-latest-attempt-play-uk-role-slavery-200730095612890.html
Umzingeli wase-Uganda uthola iminyaka engu-11 ejele